Roobka xilliga Guga oo ka curtay qeybo ka mid ah dalka | KEYDMEDIA ENGLISH
Roobka xilliga Guga oo ka curtay qeybo ka mid ah dalka
Saddexdii Gu’ ee la soo dhaafay, ayaan u di’in sidii la filayay, taas oo sababtay, in ay geeska Africa ku dhifato abaatii ugu darneyd muddo 40 sano ah, cunto iyo biyo yari daraan ayaana soo wajahaday inta badan dadka xoolo dhaqatada ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Roobka xilliga Guga [GU’] ayaa ka curtay qeybo ka mid ah gobollada Soomaaliya, gaar ahaan inta badan gobolladda Mugug, Galagaduud iyo Bay, kuwaas oo ka mid ahaa meelaha ay sida daran u saameysay abaarta muddada jirtay.
Dad kala duwan oo ku sugan qeybo ka mid ah gobollada roobabku ka curteen, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in ay xalay xilli danbe da’day, mir xooggan ilaa saakana uu socday mayaal mahiigaan ah, kuwaas oo si weyn u biya dhigay meelaha ay ku de’een.
Sidoo kale, wararku raabku, waxa ay sheegayaan in daruuruhu ka hooreen gobollada Waqoyi ee Soomaaliya iyo dhulka Dowlad degaanka Soomaalida ilaa gobolka NFD ee Woqooyi Bari, Kenya, halkaas oo deggan yihiin Soomaali badan oo xoolo dhaqato ah.
Gu, (Spring) waxaa la sheegaa inuu yahay xilli roobeedka ugu muhiimsan xilliyada Soomaaliya roobabku ka da’aan, wuxuuna ka bilowdaa bisha Maarso isagoo socda ilaa dhamaadka bisha May ama ilaa bartamaha sanadka.
Hadda, afartii qof ee Soomaalida ah mid ka mid ah ayaa wajahaya gaajo ka dhalatay abaaraha ba’an, halka Qaramada Midoobay, sheegeyso, in 4.6 milyan oo Soomaali ah aysan heli doonin cunto ku filan marka la gaaro bisha May 2022.
Gobollada Koonfureed ee dalka, dadka ayaa ku qulqulaya xeryaha ay ku jiraan barakacayaasha, kadib markii ay xoolahoodii, ku waayeen abaarta, hayeeshee, curashada Guga, ayaa soo nooleynaya rajada, waxaana la filayaa in qiyaashii hore wax iska beddelaan.
Ilaa hadda, ($47.1m) oo u dhiganta 3.2 boqolkiiba, ayaa ka soo xarootay ($1.5bn), oo loo qorsheeyay in wax looga qabto xaaladda bani’aadannimo ee dadka abaaruhu saameeyeen, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray xafiiska Qaramada Midoobay.
“Waxaan Eebbe ka baryayaa in uu madarka ka curtay qeybo ka mid ah dalka nooga dhigo mid barakaysan oo na deeqa, dadka iyo duunyaduna kaga doogaan abaarta daran ee dalka ekeysay”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare, Maxamed Xuseen Rooble.